० संविधानको प्रथम मस्यौदामा सुझाव संकलनका क्रममा मधेशलगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अवरोध पु¥यायो र त्यसपश्चात् तनाव उत्पन्न भयो । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
— मधेशका साथसाथै पहाडको पोखरा, लम्जुङ्ग, इलामलगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि मस्यौदाको विरूद्धमा जनताहरू सडकमा उत्रिए । यो जुन मस्यौदा ल्याइएको छ, यो संविधानसभाले तयार गरेको पनि होइन । चार जना एउटै जातिका मान्छेहरू बसेर बालुवाटारमा राति १२ बजे लेखिएको हो र संविधानसभामाथि थोपारिएको हो । विगतमा भएका सम्झौताहरू, सशस्त्र विद्रोह, मधेश जनविद्रोह, जनआन्दोलनलगायतका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनका बेला भएका सम्झौताहरूको विपरीत यो मस्यौदा ल्याइएको छ । यो मस्यौदा अधुरो, अपुरो र अदूरदर्शी छ । यसमा संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा हटाइएको छ । विगतमा संविधानसभामा भएका सहमतिको विपरीत, अहिलेको अन्तरिम संविधानलाई उल्ट्याएर यो मस्यौदा ल्याउने कार्य भएको छ । त्यसकारणले मधेशका जनता हुन् या पहाडका आदिवासी जनजाति हुन् यस्तो मस्यौदालाई स्वीकार्ने कुरा आउँदैन । अधुरो मस्यौदा बनाएर जनतामा दुई दिनको समय दिएर, जनताहरूलाई अध्ययनै गर्न नदिइकन, जनताले हेर्नै नपाइकन के सुझाव दिने । त्यो पनि सशस्त्रको घेराभित्र बसेर सुझाव देऊ भन्ने । जनताको आँखामा छारो हालेर एउटा नौटंकी गरेर जुन खालको संविधान नेपालमा लाद्न खोजिँदैछ त्यो स्वीकार्ने सम्भव छैन । सेना र बन्दुकको बलमा संविधान लादिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताका विरूद्धमा मधेशका जनता छन् ।
० प्रहरी दमनको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
— यो लोकतन्त्रको अपहरण हो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकार सबैको हुन्छ । चित्त नबुझेको ठाउँमा उसले भन्न सक्छ । तर, राज्यले ती माथि सेना प्रयोग गर्ने, जनतामाथि गोली चलाउने, अश्रुग्यास प्रहार गर्ने, लाठीचार्ज गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेको छ । यसरी पनि कहीं संविधान बन्छ । यो जुन राज्यको क्रियाकलाप हो, यो राज्यआतंक हो । जनतामाथि संविधान लाद्ने र जनताको अधिकार खोस्ने चेष्टा गरिएको छ ।
० तपाइँहरूले किन ‘मधेश बन्द’को घोषणा गर्नु भयो ?
— मधेशका जनताहरूमाथि भयो, अहिले पनि सेना, सशस्त्रहरू गाउँ–गाउँ घुम्ने, घर–घरमा जाने, सुतिरहेका मान्छेहरूलाई उठाएर कुट्ने जस्ता ज्याद्तीपूर्ण कार्यहरू जुन गरिएका छन् । यस्तो ज्याद्तीपूर्ण कार्यहरू त मधेशमा राणा शासनको बेलामा पनि भएको थिएन । त्यो ज्याद्तीपूर्ण कार्य र अहिले जुन दमन भएको छ, त्यसको विरूद्धमा प्रतिकारस्वरूप हामीले ‘मधेश बन्द’को घोषणा गरेका थियौं । यदि अझै पनि दमन जारी नै रह्यो भने जनता अझ सशक्तरूपमा प्रतिकार गर्नेछन् ।
० अब तपाइँहरूले के गर्नुहुन्छ ?
— अहिले हामी संघर्षका मैदानमा छौं । स्वायत्त मधेश प्रदेशलगायत अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू स्थापना गर्ने, मधेशी, आदिवासी, जनजातिलगायतकाहरूको पहिचान, दलितहरूको मुक्ति, महिलाहरूको मुक्ति, लैंगिक विभेदको अन्त्य जस्ता सवालहरू जुन छन्, यी सवालहरूलाई उठाएर यी विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी सडकमा उत्रेका छौं । हामी सडकमा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जवाफ दिन तयार छौं ।
० तपाइँहरूले मधेशमा सुझाव संकलन गर्न दिनौं भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो कति हदसम्म सफल भयो जस्तो लाग्छ ?
— तराई–मधेशका करिब–करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँबाट सुझाव संकलन नै नगरिकन भागेका छन् । जनताले खेदेका छन् । यो भने जनताको प्रारम्भिक प्रक्रिया हो । अधिकारविहीन संविधान नल्याऊ, यस्तो संविधान नल्याऊ मधेशमा जहाँ मधेशीको अधिकार नहोस् । त्यसैगरी, पहाडका जनजाति, आदिवासी, दलितहरूले पनि खेदेका छन् ।
० उत्साहजनकरूपमा सुझाव भयो भनेर प्रचार हुँदैछ नि ?
— सेना र प्रहरीको घेराभित्र दुई/चार जना कांग्रेस–एमालेका कार्यकर्ताले सुझाव दिँदैमा त्यो जनताको सुझाव मानिदैन । अर्को कुरा उहाँहरूको हातमा मिडिया, सत्ता, बन्दुक र पैसा छ । जे भनेपनि चल्छ भन्ने सोच छ । तर, जनताले त्यो स्वीकारेको छैन भन्ने कुरा देखाएको छ । उत्साहजनक भयो भने सुझाव संकलनका लागि ती पार्टीबाट गएका शीर्ष नेताहरू किन भागे ? यसले प्रमाणित गर्दैन कि जनताले के चाहन्छ भन्ने कुरा । जनता अधिकार चाहन्छन्, दासत्वबाट मुक्ति चाहन्छन् । मधेशका जनताहरू मधेश स्वायत्त प्रदेश चाहन्छन् । पहाडका जनताहरू स्वायत्त प्रदेश चाहन्छन् । आदिवासी जनजातिले अधिकार चाहन्छन् । यी कुराहरूलाई इन्कार गरेर बनेको संविधान यो देशमा लागू हुँदैन । अहिले संविधान नबन्दा त यस्तो स्थिति छ, झन् संविधान बनाएर घोषणा गरेपछि परिस्थिति अझ विकट र सम्हाल्न सक्ने बलबुत्ता बाहिर हुन्छ ।
० १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चारै पार्टीका नेताहरू मधेशबाटै जितेर आएका छन् र आज ती १६ बुँदे सहमतिकै कारण मधेशमा आन्दोलन भइरहेको छ । यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
— मधेशबाट जितेर आउने सबै नेताहरूलाई मधेशी जनताले खेदेका छन् । प्रचण्डजीकै कुरा गरौं । एक जमाना थियो, प्रचण्डजीको नाम लिने बित्तिकै कतिपय ठाउँमा सेनाहरू पनि भाग्थ्यो । तर, आज मधेशमा त्यहीं प्रचण्डजी सेनाको घेराभित्र मधेशको जनताबाट भाग्नुपेको अवस्था छ । माधवजी, सुशीलजीहरू भागेका छन् । हस्ताक्षरकर्तामध्ये विजय गच्छदार लुकेर बसेका छन् । स्थिति यो छ नि । गलत काम गर्नका लागि जनताले जिताएका होइनन् ।
० तर, ती नेताहरू नै मधेशबाट जितेर आउँछन् नि ?
— मधेशी जनताले भोट नहाले पनि जितेर आएका हुन् । सेना छदैँछ, बक्सा हेराफेरी गर्न जानेकै छन्, देशलाई लुटेर धन कुबेर बनेकै छन् । तिनका बलले चुनाव जित्नु भनेको अलग कुरा हो । जनताले चाहेको भए जनताले खेद्ने थिएन नि । त्यसकारणले चुनाव जित्ने राजनीति प्राविधिक कुरा हो । तर, जनताले अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्छन् ।
० तपाइँहरूको आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू के–के छन् ?
— सुझाव संकलनमा अवरोध पु¥याउने हाम्रो सांकेतिक विरोध थियो । यो गलत कामको जनताले विरोध गरेका छन् । फेरि पनि सत्तारूढ दलहरू चेतेनन्, क्रियाकलापमा सुधार ल्याएन, यही मस्यौदालाई जबरजस्ती संविधानको रूपमा लाद्ने प्रयास ग¥यो भने मधेश आन्दोलित हुन्छ, विद्रोह हुन्छ । त्यो विद्रोहले त्यो संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्छ र अर्को संविधान लेख्ने परिस्थिति पनि बनाउँछ ।
० अब मधेश विद्रोह कुन अवस्थामा हुन्छ ?
— मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित भएन भने विद्रोह हुन्छ । मधेशमा मात्र होइन, पहाड र हिमालमा पनि विद्रोहको तयारी हुँदैछ । यदि यही मस्यौदालाई संविधान बनायो भने मधेश, पहाड र हिमाल विद्रोह हुन्छ र त्यो विद्रोहले अर्को संविधान लेख्ने कार्य गर्नेछ ।
० तपाइँहरूले मस्यौदा च्यात्नुभयो, तर संविधानसभा किन छोड्न चाहनुहुन्न ?
— जनविरोधी संविधान घोषणा गर्दा संविधानसभाभित्रै संविधानमा आगो लगाउनका लागि त्यहाँ बसेका छौं ।
० तपाइँहरूले विरोध गर्दा गर्दै संविधान आयो भने त्यतिखेर तपाइँहरूले संविधानसभा त्याग्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ?
— अधिकारका लागि यो संविधानसभा त के धर्ती नै त्याग्न हामी तयार छौं । संविधानसभाको कुन ठूलो कुरा हो ।
० मधेश प्रतिकूल संविधान आउनुमा मधेशकेन्द्रित दलहरू कतिको दोषी छन् ?
— जनविरोधी संविधान नल्याऊ भनेर मधेशकेन्द्रित चारवटा पार्टी सडकमा उत्रेका छन् । ती मधेशी अनुहार भएका मान्छेहरू वास्तवमा मधेशी पनि होइन जो सत्तारूढ दलहरूसँग मिलेर, एउटा मन्त्रालयको बार्गेनिङ्ग गरेर जनतालाई अधिकारविहीन बनाउँछन् भने ती दोषी मात्रै होइनन् ती अपराधी पनि हुन् । त्यस्ता मान्छे मधेशका लागि गद्दार छन् ।
० तपाइँले फोरम लोकतान्त्रिकतिर संकेत गर्नुभएको हो ?
— मैले किटेर कसैलाई भनेको होइन । यस्ता कुराहरू जसले गर्छन् ती सबैलाई भनेको हुँ ।
० मोर्चाका दलहरू कतिको दोषी छन् ?
— संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा रहेका चारै पार्टीहरू जनताका अधिकारका लागि सडकमा उत्रेका छन् । अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । लड्नु दोष होइन । कमी कमजोरी भयो होला । तर, जसले गद्दारी गरेका छन्, उनीहरूले अपराध गरेका छन् ।
० तपाइँहरूको आन्दोलनका मुख्य एजेन्डाहरू के–के छन् ?
— मधेश आन्दोलनका उपलब्धी, मधेशलाई अलग राज्यको दर्जा दिने, मधेशी जनताको स्वशासन, स्वायत्तताको अधिकार पाउने कुराहरू अहिलेको संविधानले इन्कार गरेको छ । मधेशी जनता भविष्यमा नागरिक हकबाट पनि वञ्चित हुने प्रावधान आउँदैछ । जागिरका लागि जुन आरक्षण सिट थियो त्यो समाप्त हुँदैछ । अब मधेशबाट प्रतिनिधित्व कम हुने, मधेशले कर दिने, मत दिने तर उपभोगकर्ता नबन्ने किसिमको विभेद हुँदैछ । मधेशी जनताको पहिचानलाई मेटाउने प्रयास गरिँदैछ । मधेशी जनताको भाषा, भेषभूषाको मान्यता छैन । भनेपछि मधेशलाई उपनिवेशबाट मुक्त गर्न चाहँदैन । आन्तरिक उपनिवेशमै बाँचिरहून् मधेशीहरू, ती सधैं दास रहून् र काठमाडौंका शासकवर्गहरू शासक रहून् भन्ने जुन मानसिकताबाट दस्तावेज आएको छ, यसलाई विरोध मात्रै होइन यसलाई अस्वीकार गर्ने । यदि यसलाई संविधानकै रूप दियो भने मधेशले विद्रोह गरेर मधेश आफ्नो संविधान आफै लेख्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ ।
० अहिले मधेश त्यतातिर गइरहेको छ त ?
— अहिले गइसकेको त म भन्दिँन । तर, शासक वर्गको जुन विद्वेषपूर्ण मानसिकता छ त्यसले त्यतातिर धकेल्दैछ ।
० विगतका आन्दोलनका उपलब्धीहरू संस्थागत हुन सकेको छैन । तपाइँहरू अहिले पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कहिलेसम्म आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?
— विभेद रहून्जेल सबैले आन्दोलन गर्नुपर्छ । जो विभेदमा छन्, शोषित पीडित छन् उनीहरूले या त दासत्व स्वीकार गर्नुपर्छ या त दासत्वका विरूद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ । तर, मधेशका जागेका जनता अब दासत्व स्वीकार गर्दैन । हजारौं वर्ष लडेर मुक्ति पाइन्छ भने लड्छन् र आफ्नो प्राप्त गरेर छोड्छन् ।
० तपाइँहरूको ‘एक मधेश प्रदेश’ एजेन्डा अहिले पनि कायमै छ ?
— निश्चित रूपमा मधेश आन्दोलनका सबै एजेन्डाहरू अहिले पनि यथावतै छ । कुनै एजेन्डालाई हामीले छोडेका छैनौं । मधेश आन्दोलनका मुद्दाबाट हामी एक सेन्टिमिटर पनि पछि हट्नेवाला छैनौं ।
- See more at: http://hulakinews.com/fullnews.aspx?cat=interview&id=11078#sthash.jlzDhBrE.41mYGp6W.dpuf
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपालउपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
— मधेशका साथसाथै पहाडको पोखरा, लम्जुङ्ग, इलामलगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि मस्यौदाको विरूद्धमा जनताहरू सडकमा उत्रिए । यो जुन मस्यौदा ल्याइएको छ, यो संविधानसभाले तयार गरेको पनि होइन । चार जना एउटै जातिका मान्छेहरू बसेर बालुवाटारमा राति १२ बजे लेखिएको हो र संविधानसभामाथि थोपारिएको हो । विगतमा भएका सम्झौताहरू, सशस्त्र विद्रोह, मधेश जनविद्रोह, जनआन्दोलनलगायतका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनका बेला भएका सम्झौताहरूको विपरीत यो मस्यौदा ल्याइएको छ । यो मस्यौदा अधुरो, अपुरो र अदूरदर्शी छ ।
यसमा संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा हटाइएको छ । विगतमा संविधानसभामा भएका सहमतिको विपरीत, अहिलेको अन्तरिम संविधानलाई उल्ट्याएर यो मस्यौदा ल्याउने कार्य भएको छ । त्यसकारणले मधेशका जनता हुन् या पहाडका आदिवासी जनजाति हुन् यस्तो मस्यौदालाई स्वीकार्ने कुरा आउँदैन । अधुरो मस्यौदा बनाएर जनतामा दुई दिनको समय दिएर, जनताहरूलाई अध्ययनै गर्न नदिइकन, जनताले हेर्नै नपाइकन के सुझाव दिने । त्यो पनि सशस्त्रको घेराभित्र बसेर सुझाव देऊ भन्ने । जनताको आँखामा छारो हालेर एउटा नौटंकी गरेर जुन खालको संविधान नेपालमा लाद्न खोजिँदैछ त्यो स्वीकार्ने सम्भव छैन । सेना र बन्दुकको बलमा संविधान लादिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकताका विरूद्धमा मधेशका जनता छन् ।